Iindaba-Umgangatho ophakamileyo weCharms Charms
Umgangatho ophezulu weCharms Charms
Ngaba ungathanda ukwenza amakhubalo esinyithi akumgangatho ophezulu kwizixhobo zakho? Nceda yiza uze usijoyine, Izipho eziMnandi eziKhazimlayo ziya kuwuzalisekisa umnqweno wethu kwaye zizise umbono wakho kubomi bokwenyani.
Sinikezele ngoyilo olukhulu oluvulekileyo lwezacholo zomqala ezihonjisiweyo, iintsimbi ezinomtsalane, umtsalane wezilwanyana, Umhlobiso weKrisimesiukuba ukhethe kuzo, eziya kuthi zisindise imali yakho yokubumba, kwaye kwangaxeshanye, uyilo lwesiko lwamkelekile kakhulu. Kukho uyilo olwahlukileyo lweemitya ezinemathiriyeli eyahlukeneyo, ubume, kunye nombala okhoyo. Siqinisekile ukuba iyakwenza usuku lwakho lube nomtsalane we-DIY kwizixhobo zakho, ezinje ngeebhukhmakhi, ukurhola imali, ipendenti, ibhanti yesandla, ikhubalo lewayini, ifowuni ekrelekrele, iimoto kunye nokunye.
Izinto eziphathekayo: zifa i-zinc alloy okanye i-pewter, ifa ibetha ubhedu okanye isinyithi, i-aluminium
Umbala: owenziwe ngokwezifiso kubandakanya umbala ocacileyo ogcwalisiweyo, ohlukeneyo wokuprinta
-Ukugqiba: igolide ekhanyayo / isilivere / i-nickel / ubhedu, i-nickel emnyama, i-mat okanye i-antique
-Ukulungisa: izixhobo ezahlukeneyo ziyafumaneka
-MOQ: 100pcs / uyilo
-Packing: ibhegi poly poly okanye ngokweemfuno zabathengi.
Ngaphandle kokugqitywa komgangatho, sikwanayo UV yoshicilelo iintsimbi namakhubalo ezitshixoZeziphi iimveliso zethu ezintsha zendlela. Olu ludibaniso olumangalisayo olunemilo yentsimbi ye-3D ebekwe kwimvelaphi epheleleyo yombala. Yenza uyilo lwakho lube nomtsalane ngakumbi & ekubambeni kwamehlo.
Ngendawo yethu yokuvelisa engaphezu kwe-64,000 yeemitha zesikwere kunye nama-2500 abasebenzi abanamava kunye noomatshini aboneleyo nabaphambili, singumvelisi onamava egxila kumakhubalo enziwe ngesiko, izikhonkwane, iingqekembe, ii-cufflinks, ii-tie bar kunye nezinye izinto zentengiso ezingaphezu kwama-3 eminyaka.
Ngaba ufuna ukwazi ngakumbi ngamakhubalo? Nceda uthumele imibono yoyilo kunye nobungakanani, ulwazi lobungakanani ku-sales@sjjgifts.com, singadlulisela iilogo zakho zesiko kwiimveliso ezigqwesileyo.